About us - Beihai edityanisiweyo Materials Co., Ltd.
I-BEIHAI AFP dept.is yinkampani ekhethekileyo yokudibanisa izinto ezenziwe ngesinyithi kunye nokuphanda kunye nokuphuhlisa, ukuvelisa, ukuqhuba kwemveliso enxulumene noko, ukusetyenziswa kobunjineli bemveliso kunye nenkonzo yezobuchwephesha ehambelana nayo. Ngoku inkampani inamalungelo obunini bepropathi enomgangatho ophezulu wokuvelisa ekuveliseni, ekwenziweni nasekusebenziseni i-foam aluminium.
1. Iifektri ezi-3 ezinabasebenzi abangama-2100 abakhethekileyo ekuveliseni iimveliso zeAluminiyam.
2. Ngaphezulu kweminyaka engama-26 yamava kunye neendidi zemveliso ezingaphezu kwe-18 ezinokubonelela ngeenkonzo zokumisa.
3. Zonke iimveliso zethu ezinemigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya, iimveliso zithunyelwa kuMazantsi mpuma eAsia, eMid East, eMpuma Yurophu, eMzantsi Melika, eMntla Melika nakwezinye iimarike ezinkulu zaphesheya.
Iqela le-R & D kunye neetekhnoloji eziphambili ukuze zibonelele ngokufanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeemveliso ezisemgangathweni kunye neemveliso ezenziwe ngokwezifiso.
5. Sinamasebe akumgangatho othile wokuqinisekisa ukuba akukho ngxaki esemgangathweni phambi kokuziswa.
6. Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe phantse kubeyiminyaka elishumi yembali, kuqokelelwe amava atyebileyo kwaye aqhelene nesatifikethi samaxwebhu kunye nenkqubo yokuthumela kwelinye ilizwe ekubonelela ngeenkonzo zobungcali bokuthumela ngaphandle.
7. Ngokuhambelana neemfuno zabathengi zeendlela zokuhlawula eziguqukayo kunye ezahlukeneyo. Ezifana ne-L / C, T / T, umanyano lwaseNtshona, i-paypal, njl.
8. Iiyure ezingama-24 kwi-intanethi yokuthengisa kwangaphambili kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa ukubonelela ngempendulo yobungcali kunye nexesha elifanelekileyo.
IQela loBugcisa eliQinisekileyo
Inkampani igxile ekuveliseni izixhobo zokusebenza eziphezulu, amandla oqinileyo obuchwephesha, amandla ophuhliso olomeleleyo, iinkonzo ezilungileyo zobugcisa.